कहाँ अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ? प्रचण्डले कांग्रेसभन्दा बढी भाग खोजेपछि ... - Media Dabali
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्री छान्न र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस भएको छ ।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको मंगलवार २२ दिन पुगेको छ । सरकारमा हालसम्म प्रधानमन्त्री, ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्रीको भरमा छ । सत्ता सहयात्री दलहरुबीच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ५ दल आवद्ध छन् ।
सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगीमध्येको एउटा घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने पक्काजस्तै छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
मुख्य नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसबाट अझै को–को मन्त्री बन्ने टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसमा गुटअनुसार मन्त्रीको सूची बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हैरानीमा छन् । जसपाले पनि सरकारमा पठाइने मन्त्रीबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबण्डामा देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुबीच कसले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।
भागबण्डामा सहमति गर्न भन्दै सोमवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ण्ड र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सोमवारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा नजाने अवस्थामा ९ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । जसपाले समेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ । जसपाले नेपाल पक्ष सरकारमा नआएको अवस्थामा ८ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण समेत भागबण्डामा समस्या हुँदै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रले परराष्ट्र सहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आएको छ ।
कांग्रेसले समेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ । तर शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा देखिएका छैनन् तर रक्षामा भने अरु दलले खासै चासो राखेका छैनन् ।
यसैबीच, माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीका विषयमा शनिवार र आइतवार छलफल गरे पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा दुबै सरकारमा नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिएका छन् तर कसको नेतृत्वमा क–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन सकेको छैन ।
यसअघि नै मन्त्री छान्न आफूलाई हम्मेहम्मे परेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी रहेको बताइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा हाल जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री छन् । थप मन्त्रीका लागि मन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रमा मातृका यादव, हरिबोल गजुरेल, शशी श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, अमनलाल मोदी, सुदन किराँती, जयपुरी घर्ती र महेश्वर गहतराज ‘अथक’ दौडमा रहेका छन् ।
यसैबीच, जसपाले पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेको छैन । जसपाले शनिवार मात्रै संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादवलाई छानेको थियो । जसपाबाट सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष यादवले नै गर्ने लगभग निश्चित छ ।
जसपाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकस भएपछि अध्यक्ष यादवसहित अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई जिम्मा दिएको छ । तर अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निश्चित छैन । जसपाले पनि कति मन्त्रालय पाउँछ टुंगो छैन ।
जसपाबाट महेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, रेणु यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै छ । मन्त्रीका लागि इस्तियाक राई, रामसहाय यादव, सूर्यनारायण यादव, प्रमोद शाह र मृगेन्द्रसिंह यादव समेत दौडमा रहेका छन् ।
यसैबीच, कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् । कांग्रेसले अब पार्टीभित्रको नेता रामचन्द्र पौडेल समूह र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई समेत मिलाएर सरकारमा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
यसरी भागबण्डा मिलाउँदा कांग्रेसबाट अब ४ वा ५ जना मन्त्री थपिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेल पक्ष र सिटौला पक्षलाई १/१ मन्त्री दिन सक्छन् भने आफ्ना तर्फबाट थप मन्त्री बनाउन सक्ने देखिएको छ ।
पौडेल र सिटौलानिकट नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अझैसम्म मन्त्रीका लागि दुबै पक्षबाट नाम मागिसकेका छ्रैनन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माले पहिले सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलहरुबीच मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाएपछि आफ्नो दलभित्रबाट नाम माग्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो गठबन्धन सरकार हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्री टुंग्याएर आफ्नो दलबाट को–को हुने टुंग्याउनुहुन्छ, छलफल हुँदैछ ।’
कांग्रेसमा पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. मीनेन्द्र रिजाल, मीन विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, डा. नारायण खड्का, भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरी मन्त्री बन्ने दौडमा रहेका छन् ।
यसैबीच, सत्ता साझेदार दलले सरकारमा सहभागी हुन एमाले नेता माधव नेपाललाई फकाउन अझै प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आईतवार मात्रै पनि नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुगेका थिए । तर प्रचण्डले आईतवार नै आफ्नो दलको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपाल पक्ष सरकारमा आउने सम्भावना कम हुँदै गएको सुनाएका थिए ।
नेपालनिकट रहेर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई सघाएका २२ सांसदले भने सरकारमा सहभागी हुन नेपाललाई सुझाउँदै आइरहेका छन् । तर आन्तरिक कलहका कारण आफ्नो पक्षलाई सरकारमा पठाउने नपठाउने विषयमा नेपालले गठबन्धनलाई निर्णय दिन सकेका छैनन् ।
नेपालले सो विषयमा कानूनका जानकारसँग समेत छलफल गरिरहेको बताइन्छ । सरकारमा सहभागी हुँदा मूल पार्टीबाट हुने कारबाही र त्यसपछिको अवस्थाका विषयमा नेता नेपालले आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दै आइरहेको बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।